We.com.mm - Justin ဆီက နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Selena အလိုချင်ဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင်
နောက် (၂) ရက်သာ လိုတော့တဲ့ Selena ရဲ့ မွေးနေ့မှာ Selena ဟာ Justin ဆီကနေ အလိုချင်ဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင် တစ်ခုရှိကြောင်း Selena ရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေအသိုင်းအဝိုင်းမှ Hollywood Life ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
ဒီလက်ဆောင်ကတော့ Selena အနေနဲ့ သူမရဲ့ မွေးနေ့ကို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သာ ဖြတ်သန်းချင်လိုပြီး Justin အနေနဲ့ သူမကို မွေးနေ့ဆုတောင်းစကား ၊ လက်ဆောင် ၊ ပန်းစည်း စတာတွေကို မပေးဖို့ ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် Sms ပို့ပြီးတော့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူမကို Birthday Wish မလုပ်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပြီး စေ့စပ်သူရှိပြီးသား Justin အနေနဲ့ သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထပ်မကစားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီပြောကြားချက်အရ Selena ဟာ Justin နဲ့ Hailey တို့စေ့စပ်ခြင်းအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး Justin နဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ အေးအေးဆေးဆေးနေလိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... သူမတို့နှစ်ယောက်ဟာ ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာအောင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခဲ့ကြဖူးသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူမအနေနဲ့ သံယောဇဉ်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလောက်ပါဘူး... ဒါပေမယ့် Justin က တစ်ခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ စေ့စပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ မတတ်နိုင်တဲ့ အဆုံးမှာ သူမဟာ ဒီသံယောဇဉ်တွေကို မြေမြုပ်ပစ်ချင်ပုံရပါတယ်...
Justin ကိုလဲ သူစေ့စပ်လိုက်တဲ့ သတို့သမီးလောင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စေချင်သလို သူမလဲ အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းချင်တဲ့အတွက် ဒီလိုလက်ဆောင်မျိုးလိုချင်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်... အားလုံးကတော့ Selena ရဲ့ ဒီနှစ်မွေးနေ့ပွဲကို လုံး၀ စိတ်ဝင်စားနေကြပြီး Selena တစ်ယောက် သူမရဲ့ မွေးနေ့ပွဲမှာ Justin နဲ့ ပတ်သတ်မှုတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်လာမလား??? ဒါမှမဟုတ် သူမဘဝရဲ့ လက်တွဲဖော် အသစ်တစ်ယောက်ကို ပရိသတ်တွေကို အသိပေးမလား???ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲ မွေးနေ့ကို ဖြတ်သန်းရင်း Single Life မှာပျော်ရွှင်နေမလားဆိုတာတော့ မွေးနေ့ကျမှပဲ သိရမှာပေါ့နော်..
Source - Hollywood Life
Votingအများဆုံးရနေတဲ့Miss Grand Internationalပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့National Costume(၁၀)စုံ
မယုံနိုင်စရာဖြစ်ကုန်ပေမဲ့ မေမေတစ်ယောက် ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
မုံရွှာသြင်္ကန်မှာ အပီကဲမယ့် ပိုပို
မုံရွာက ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြားထောင်ချီနဲ့အတူ လက်ဝယ်ဖမ်းဆီးရမိ
Runway Model တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ Stephen Thompson
မွေးနေ့မှာ မိသားစုဝင်တွေရောက်မလာပေမယ့် သူစိမ်းတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ (၆၁)နှစ်အဘိုးအို
သင့်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပြန်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက် (၇)ချက်ကို အရင်လုပ်ကြည့်ပါ
ဝက်ခြံကြောင့် ကျန်ခဲ့တဲ့ အမာရွတ်တွေကိုသဘာဝနည်းနဲ့ဘယ်လိုပျောက်အောင်လုပ်မလဲ